Xiaomi na-akwadebe mwepụta nke smartwatch ya nke ga-akwụ ụgwọ ihe na-erughị 135 euro | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi na-akwadebe mwepụta nke smartwatch ya nke ga-enwe ọnụ ala karịa 135 euro
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na smartwatch ahịa ma kwụsị ịmara ndị nrụpụta bidoro nke ha, anyị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa na ọtụtụ ndị nrụpụta, dịka ọmụmaatụ n'ahịa ekwentị, amalitela igwe nke ha. Ọ bụ ihe na-egbu oge maka oge ahụ Xiaomi amalitebeghị smartwatch yaỌ bụ ezie na ọ nwere otu n’ime ihe ndị nwere ihe ịga nke ọma na ahịa.
Nke ahụ nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya na nke ahụ bụ Dabere na ọtụtụ asịrị, onye nrụpụta China nwere ike imecha mmepe nke smartwatch ya, nke dị ka Pan Jiutang si kwuo, onye nyocha China a maara nke ọma ga-adị na China n'oge na-adịghị anya ma nwee ọnụahịa ọnụ ọnụ nwere ike ịbụ 1.000 yuan, ihe dị ka 135 euro Na mgbanwe.
N'oge ugbu a anyị amaghị ozi ọ bụla ebe ọ bụ na Xiaomi achọghị ikwenye n'oge ọ bụla ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ na-eche maka ịmalite igwe elekere anya, ma ihe akaebe niile na-egosi na ịmalite nwere ike ịbụ ihe dị n'akụkụ nkuku.
Maka Xiaomi, ọ bụ oge ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ọ bụ na na ọrụ ọ na-emebu, ugbu a, anyị ga-agbakwunye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmalite nke ngwaọrụ ọhụrụ, nke a ga-esonyere site na smartwatch a n'oge na-adịghị anya nke ga-emezue nnukwu katalọgụ nke ngwaọrụ ndị China. emeputa nwere na ahịa.
Ugbu a, anyị ga-eche ka Xiaomi gosipụta ọhụụ ọhụụ ya, na ọ bụrụ na nkọwa ya niile asịrị asịrị, yana ọnụahịa ya, anyị ga-enwe ọhụụ ọhụụ site n'aka ndị na-ewu ewu na China na-ewu ewu na-aga nke ọma.
Kedu ihe ị chere maka ọnụahịa nke Xiaomi smartwatch yiri ka ọ nwere?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Xiaomi na-akwadebe mwepụta nke smartwatch ya nke ga-enwe ọnụ ala karịa 135 euro
Ma ụbọchị ahụ ruru; M nnọọ uninstalled Pokéom Go na ndị a bụ ihe kpatara
Samsung Galaxy Note 7 nwere ike ịdebe ya na South Korea, ma ugbu a ọ bụ ihe ịga nke ọma